Yan Aung: စိတ်ကိုရွှင်ပျစွာထားခြင်းသည်လည်း မင်္ဂလာတစ်ပါး…
`ကနေ့လား နက်ဖြန်လား သေကြရမယ့်အတူတူ ကြိုးစားကော ဘာထူးဦးမှာလဲ အလကားပေါ့´ ဟူ၍ပြောလေ့ရှိကြ၏။ အကယ်၍ `ကနေ့နက်ဖြန်´ သေခဲ့သော် တော်သေး၏။ မကြိုးစားပဲ နေလိုက နေပါတော့။ သို့သော် မသေဘဲ အသက်ရှည်နေမည်ဆိုလျှင်…?
`ကနေ့နက်ဖန် သေကြရတော့မှာပဲ´ ဟူသော စကားမှာ စင်စစ် တရားရ၍ ပြောကြသည်မဟုတ်။ ဒုက္ခရောက်မည့်ဘေး ကြောက်ရွံ့၍ ပြောသောစကားဖြစ်ပေသည်။ တရားသံခပ်ပါပါနှင့် ဆင်ခြေပြလျှင် အများ၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းမှ လွတ်သည့်ပြင် ချီးမွမ်းခြင်း ခံရလေရဲ့ဟု ကြိုတင်သိနှင့်ကြ၍ ဤသို့သုံးကြ၏။ သေသေချာချာ စဉ်းစားလိုက်သော် ထိုသို့ဆင်ခြေပေးခြင်းမှာ တရားလမ်းကြောင်းမကျသည့်အတွက် မချီးမွမ်းထိုက်သည့်အပြင် ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချဖို့ သင့်တော့ပေသည်။
မိမိ၏စိတ်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ကြပ်မတ်၍ မပြုပြင်လျှင် မည်သူမျှလာ၍ ပြုပြင်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်။ မိမိကိုယ်တိုင် ကြပ်မတ်ပြုပြင်ရန်မှာလည်း မလွယ်လှ။ သို့သော် ခဲခဲယဉ်းယဉ်းကြီးလည်း မဟုတ်။ လွန်လွန်မင်းမင်းကြီးလည်း မခက်လှ။ သေသေချာချာ ကြိုးစားလျှင် မကြာမြင့်မီ အောင်မြင်ထမြောက်နိုင်ပါသည်။ ကြိုးစားပါ။
အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်း၌ ဖြစ်ပျက်နေကြသော စိတ်သောကရောက်ခြင်း၊ ပူပန်ခြင်းတို့ကို သေချာစေ့ငု လိုက်၍ကြည့်လိုက်လျှင် ပစ္စည်းဥစ္စာအတွက်မဟုတ်။ မူလစိတ်ရင်းကိုက မရွှင်ပျခြင်း၊ ထိုင်းမှိုင်းလေးလံခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ရလေသည်။
ဤသို့ စိတ်၏ ထိုင်းမှိုင်းခြင်း ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းသည်လည်း မိမိ၏လုပ်ငန်း၌ စိတ်မ၀င်စားလှဘဲ `ပြီးလျှင်ပြီးရော´ သဘောနှင့် ၀တ်ကျေဝတ်ကုန်မျှ အောက်မေ့လုပ်ကိုင် ကြ၍ဖြစ်ပေသည်။
`တစ်နေ့လာလဲ မဲပြာပုဆိုး၊ တစ်နေ့လာလဲ မဲပြာပုဆိုး´ ဆိုရိုးရှိသကဲ့သို့ တစ်နေ့မှ တစ်နေ့သို့ ကူးပြောင်းအသက်ရှင်လျက်နေရစေကာမူ ရွှင်ရွှင်ပျပျ ရှိလှသည်မဟုတ်။ ဤသို့ရွှင်ပျစွာ မနေတတ်သဖြင့် စိတ်၏ ထိုင်းမှိုင်းခြင်း ဖြစ်ကြကုန်၏။ စိတ်ထိုင်းမှိုင်းကြ၍ပင် အလုပ်အကိုင်၌ နှောင့်နှေး လေးကန်နေကြကုန်၏။
ဤသို့ ဖင့်လေးသဖြင့် အလုပ်မပြီး။ အလုပ်မပြီးသောကြောင့် စိတ်သောကရောက်ရ၏။ သို့်ဖြစ်၍ စိတ်သောက ရောက်ခြင်းသည် အလုပ်အကိုင်ကို ဖျက်ဆီးတတ်သည့် အကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။ သို့နှင့်မပြီးသေး။ ကြီးပွားရေးအတွက် မိမိကြံစည်ထားသရွေ့ ကြိုးစားရန်ဖင့်စား၍ အချိန်လင့်စေ၏။ ကြီးပွားရေး၏ ရန်သူကြီးလည်း ဖြစ်တော့၏။
(စာမျက်နှာ ၇၉-၈၁၊ ဦးထွန်းလှ၏ `ဘာလဲဟဲ့လောကဓံ´ စာအုပ်မှ ကောက်နုတ်ချက်)
>balargout...ဟုတ်ပါ့ ကိုဘာလဂေါက်ကြီးရေ.. ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်တော့ လုပ်ကြရမှာပဲဗျ. လာအားပေးတာလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...